HORDHAC: Qarabag FK v Arsenal – Gool FM
HORDHAC: Qarabag FK v Arsenal
CR Shariif October 4, 2018
( Europe League ) 04 Okt 2018. Arsenal ayaa marti u ah kooxda FK Qarabag kulamada labaad ee heerka group-yada koobka Europe League.
Gunners ayaa guul weyn ku daah furatay tartankan oo ay cayarayaan sanadkii labaad oo xariira kaddib markii y ku fashilmeen iney ku dhameystaan afarta kaalin sare ee horyaalka.
Waqtiga: 07: 55 pm ( SGA )
Garooraha: Davide Massa ( Italy )
Garoonka: Baku Olympic Stadium
Pierre-Emerick Aubameyang iyo Aaron Ramsey ayaa seegi doona kulanka Arsenal ay wajaheyso tartanka Europa League FK Qarabag.
Dhaliyaha Aubameyang ayaa xanuunsan, halka laacibka qadka dhexe Ramsey uu codsaday in la siiyo fasax si uu ula joogo xaaskiisa oo xaamilo ah ama uur leh.
Goolhaye Petr Cech ayaa ku maqan dhawwac muruqaa, halka Ainsley Maitland-Niles uu dhib qabo lugta, iyadoo Laurent Koscielny Konstantinos Mavropanos ay mudda dheer kooxda la maqan yihiin.
Henrikh Mkhitaryan ayaa kamid noqon kooxda u safartay Azerbaijan sababo la xariira amaan agwii.
Saxiixii xagaaga Bernd Leno ayaa la filayaa inuu goolka kusoo bilaawdo, halka Mesut Ozil iyo Alexandre Lacazette ay cayaarayaan kulankan.
FK Qarabag marnaba hore umawada cayaarin Arsenal. Waxayn afar kulan oo tartamada yuruba la dheeleen kooxaha England laakiin dhammaantood waa ay guudarreysteen iyagoo laga dhaliyay kulamadaas wadar gooleed oo dhan 14-1.
Arsenal ayaa adkaatay afar kulan oo kulamada banaanka kooxda Europa League xagaagii 2017-18, waa heer kooda ugu fiican ee hal xili cayaareed tartamada yurub tan iyo sanad cayaareedkii 2005-06 xili oo kooxda ay gaartay finalka Champions League.
FK Qarabag ayaa qasaartay mid kasta oo kamida seddaxdii kulan ee lasoo dhaafay koobka Europa League, waana rikoodhkoodii ugu xomaa ee tartankan.
Arsenal ayaa guuldareysatay kaliya hal cayaar 15kii kulan ee lasoo dhaafay kulamada group-yada tartamada yurub (11 guul iyo 3 barbaro) – inkastoo guukdaradii ugu dambeysay ay kasoo gaartay kooxda FC Koln cayaar looga badiyay 1-0.
Tan iyo bilaawii kal cyaareedkii hore, 17 cayaariyahan ayaa gool u dhalisay kooxda Arsenal tartanka Europa League – ugu yaraan lix gool ayay ka badan yihiin kooxaha kale Zenit iyo Lazio, ayaa dhankoodana waxaa goolal u dhaliyay min 11 cayaariyahan.
Barcelona oo Guul Muhiima ka gaartay Tottenham Napoli oo Guuldarro waqti dambe biday Liverpool iyo Inter Milan oo guul kasoo hoyday Dhigeeda PSV Eindhoven
HORDHAC: Chelsea v Vidi FC